Reer Tansaaniya oo u dabbaaldegay Maalinta Midowga - Sabahionline.com
Reer Tansaaniya oo u dabbaaldegay Maalinta Midowga Abriil 27, 2012
Reer Tansaaniya ayaa Khamiistii (26-ka April) u dabbaaldegay sanad-guuradii 48-aad ee ay Tansaaniya ku midoobeen Tanganyika iyo Zanzibar, waxaanay ku damaashaadeen Staadiyamku Uhuru ee ku yaal Daaru Salaam. Qodobbo la xiriira
Hoggaamiyayaasha Tansaaniya oo ugu baaqay Muslimiinta in ay ka qayb-qaataan tirakoobka
Dood wali ka taagan doorka dowladda midawga ee Tanzania
Madaxweyne Jakaya Kikwete iyo kolonyadiisa gaadiidka ayaa yimid istaadiyamka, isagoo uu wehlinayey Taliyaha Ciidamada Difaaca, Jeneraal Davis Mwamunyange. Kikwete ayaa qaatay 21-madfac oo salaan ah oo ay siiyeen koox salaan sharaf ah oo sii joogtay kobta damaashaadka, Daily News-ta Tansaaniya ayaa arrintaa werisay. Carruurta dugsiyada oo ka kala yimid dalka oo idil ayaa kox-koox u heesayey waxaanay u soo bandhigeen qalaamo-rogad, kulankaana oo ay soo xaadiray xubno ka socda dawladda Tansaaniya iyo kumanaan reer Tansaaniya ah. 1964-kii ayaa xaflad ka dhacday Uhuru Staadiyam waxaa laysku qasay ciid laga kala keenay Tanganyika iyo Zanzibar. Muxuu kula yahay qoraalkan?